Izembozo → Izembatho ezisebenzayo • Imishini efekethisiwe yekhompyutha ye-P & M
Ama-ovaroli zisetshenziswa ezimbonini eziningi, ukwehluka kwazo kuzenza zilungele izikhundla ezahlukahlukene, zombili lapho kunconywa amasethi alahlwayo nalawo epulasitiki.
Isudi ingasetshenziswa ngokushintshana ku- sweatshirts i ibhulukwe. Ngenxa yayo, ungavikela wonke umzimba kanye nezingubo ezizimele ezintweni eziyingozi nasekungcoleni.
Ukuze kube lula futhi kududuzeke, abakhiqizi abaningi basebenzisa izixazululo ezingeziwe, njengezici ezisekela isudi ezandleni, ziyivimbe ekushwabeni.
Sikunikeza ekunikezelweni kwethu ama-ovaloli afakiwe, kanye nezinguqulo ezithambile zasehlobo kanye amasudi ezikhethekile zokuzivikela.
Ikhwalithi ephezulu yezinto iqinisekisa ukuqina kwesikhathi eside kwamasudi, kepha futhi nokusakazwa komoya okwanele, okuvimbela ukujuluka okweqile.
Isizathu esiyinhloko amasudi okusebenza ukuvikela izingubo ekulimaleni noma kumabala, kanti inhloso yezingubo zokuvikela ivikela amakhemikhali noma umlilo.
Singabasabalalisi bama-brand coveralls 3M, UDupont, uLeber noHollman, uReis futhi resin. Amanye amasethi anothisiwe ngamapokhethi emadolweni avumela ukufakwa kwamaphakethe wamadolo umsebenzi omude ngenkathi eguqe. Izembozo zenziwe ngemigqa eqinisiwe ezindaweni ezibucayi kakhulu.
Ngenxa yomehluko wokushisa okusebenzayo, sinikela ama-ovaloli womsebenziezazenziwe ngezinto zomoya ezivumela inkululeko yokuhamba, kunciphisa ukujuluka okukhulu ngesikhathi somsebenzi. Izingubo ezinjalo zilungele ukusebenza emihlanganweni yokufundisana ngezimoto, izinsimbi zokuthwebula izinto, amapulamba kanye nokunye - noma yikuphi lapho kunengozi enkulu yokungcola ngezinto okunzima ukuziwasha.
Engxenyeni yamasudi ehlobo, kukhona nezinguqulo ezingenaluthuli, ezingaphothulwa ngazo buso noma ngesigqoko sokuzivikela. Izindwangu zokuvikela zenziwe ngezindwangu ezisezingeni eliphakeme eziqinisekisa ukusetshenziswa kwesikhathi eside. Ukuze uthole ikhwalithi engcono, amanye amamodeli aqinise izingqimba ukuvikela ekuqhekekeni nasekufeni. Siphinde sibe namamodeli anamaphakethe efoni athungiwe.
Ama-ovaloli asebenza ebusika kungenye indlela yokugqoka yakudala enamabhulukwe noboya. Inzuzo yabo inguqulo evikela ukungcola phakathi kwezendlalelo ngazinye. Ngenxa yokusetshenziswa kwenhlanganisela efanelekile yempahla, ayinamandla kakhulu, futhi lokhu kuvumela inkululeko yokuhamba. Ama-ovaloli ebusika ekunikezweni kwethu enziwa yinkampani iReis.
I-jumpeduit efakiwe yenziwa ukotini ngokuhlanganiswa kwe-polyester, okufaka nokufaka i-lining. Ingemuva linothiswe ngenjoloba ekhethekile yenkululeko engcono yokuhamba. Lezi zinhlobo zemodeli zilungele kakhulu ama-welders, abakhi bomgwaqo, ama-fterter nabakhi bezokwakha. Izembozo zomsebenzi zinamapokhethi akuvumela ukuthi ugcine ifoni noma izinto ezincane. Imidwebo okhalweni nasemikhonweni ivimbela ukudonsa phezulu ngenkathi unyakaza. Amanye amamodeli anezikhwama zamaphakethe zokunciphisa ingcindezi lapho esebenza emadolweni.
Izembozo ezingezona ezilukiweyo neze zokwenziwa
Amasudi okuvikela akhethekile avela ezinkampanini ezinjenge-3M noma iDupont enzelwe ukuvikela ezintweni eziyingozi. Izambatho ezinikeziwe zinikezelwe, phakathi kwabanye. abadwebi, abazingeli kanye nabantu abasebenza ngamakhemikhali aqinile. Ngaphezu kwalokho, ukuphepha, amasudi akhethiwe ayatholakala ngemibala yokuxwayisa. Zenzelwe abantu abasebenza ezindaweni zomphakathi, izimo zezulu ezinzima noma ebusuku.
Amasudi okuvikela akhethekile ahlangabezana nezindinganiso ezidingekayo ezibekwe yi-European Union kumasudi okuvikela. Ama-ovaroli anikezelwe ezimweni zokusebenza ezinzima avikela ezintweni zamakhemikhali, izinto ezinemisebe ye-radioactive, uthuli nezinhlayiya ezikhipha imisebe. Imishini eyengeziwe eneziphu yenza kube lula ukuyigqoka.
I-Allegro work overallsama-ovaloli womsebenzi wabesifazaneama-ovaloli ocezu olulodwaama-ovaloli womsebenzi wabesilisaama-ovaroli angangenisi imvulaama-ovaloli womsebenziukusebenza kwama-AllegroAma-ovaloli womsebenzi we-Audiama-ovaloli womsebenzi wabesifazaneAma-overalls eGdyniaama-ovaloli ocezu olulodwaI-Krakow isebenza ama-overallsama-ovaloli womsebenzi wabesilisaukufakwa kwama-overall emsebenziniIzembozo zomsebenzi ze-OLXama-ovaloli womkhiqiziumsebenzi wokufudumezaama-ovaroli asetshenzisiweama-ovaroli womsebenzi iWarsawama-ovaroli anokuphrintaama-ovaloli asebenza ebusikaama-ovaloli womsebenzi wokuvikelaizembozo zomsebenzi wokuvikelaizembozo zomsebenzi ezishibhileindwangu yezembozo zomsebenziizingubo zokugqoka ama-ovaloliwasebenzisa ama-ovaloli womsebenzi
5 / 5 ( 12 amavoti )